Tia namana tafahoatra loatra ny vadiko ary mampiady anay matetika izany.
Rehefa miresaka amin’ny olon-tiako ao anaty Facebook aho dia anaovany teny maharary.
Rehefa mifankahita mivantana anefa izahay dia manambitamby be izy. Tamin’izaho nankany amin-dry zareo koa dia nampahafantariny ny ray aman-dreniny aho. Tia ahy ve izy izany sa tsia ?
Misy lehilahy izay tena tiako,
nefa izy milaza ho tsy tia ahy sady manaratsy ahy any amin’ny namany. Mahagaga ahy anefa, fa izy mijery ahy foana. Inona no mety ho dikan’izany fijeriny izany ?
Marina ve fa ny tovovavy maditra no tena mahita fiainana ? Izaho mantsy zaza hendry foana, dia lazain’ny olona tsy mahita fiainana.
Ny dikan’ny hoe : nahita fiainana mihitsy eto, no tsara apetraka. Samy manana ny fiainana niainany mantsy ny olona tsirairay, fa tsy misy lasitra tsy maintsy arahina.
Ny sipako nanolana vehivavy iray mpiara-mianatra taminy, teo amin’ny faha-14 taonany.
Nitory ny ray aman-drenin’io vehivavy io, ka voatery tsy maintsy niaraka ry zareo.
Lasa fahazarana fotsiny sisa ny tokantrano ho an’ny vadiko, ka lasa voasarika niaraka tamin’olon-kafa aho. Inona no ataoko hamerenana ny fiainanay taloha ?
Ny antony voalohany mahatonga ny fakam-panahy dia ny tsy fahampian’ny serasera eo amin’ny mpivady. Ny fahatsapana ny banga eo aminareo no nandrisika anao hanaiky ilay olona iray. Ilaina ny mifampiresaka mazava, amim-pahatsorana sy amin’ny fo tony.
Vehivavy manambady aho ary manan-janaka 5 taona.
Ny vadiko efa niteraka tamin’ny vadiny teo aloha ary 18 taona io zanany io. Tsy te hifanerasera amin’ilay zana-badiko intsony aho,
Mba tiako hivelabelatra ny valahako. Misy fomba azo atao ve hahatonga izany, ohatra hoe fanatanjahantena ?
Fomba iray hahazoana valahana mivelabelatra ny fampihenana ny kibo, raha toa ka misimisy kibo ianao.
Ny miaraka mirevirevy sy mivoaboaka amin’ireo namany no tiany kokoa noho ny miaraka amiko, na miaraka amin’ireo zanakay mianadahy. Inona no ataoko ?
Raha ny fitenenana azy fotsiny mba hifantoka kokoa amin’ny ao an-trano dia tsy handaitra. Mila mitady fomba hahatamana azy ao an-trano ianao, miaraka amin’izay. Isan’izany ny famelàna azy hitondra ireo namany ao an-tranonareo. Sao mantsy tsy ankasitrahanao loatra ireo namany, nefa namany tiany, ka mahatonga azy handany andro miaraka amin’ireo any ivelany. Azonao atao koa ny mamorona zavatra iarahanareo manao, na iarahanareo mianakavy. Kendreo mba ho zavatra mahaliana azy izany. Ataovy tsindraindray aloha amin’ny voalohany, ovaovao koa, hahafantarnao izay tena ankafiziny. Rehefa hitanao fa mahazo tsirony izy dia ampitomboy tsikelikely ireo karazan-javatra iarahanareo manao. Fa na izany aza, omeo fotoana foana ihany koa izy mba hiarahany amin’ireo namany. Hevero ho toy ny fiainany manokana izany, ary araraoty koa mba hananao fiainana manokana, hiarahanao amin’ireo namanao, hialanao voly irery, hanaovanao metimety…
Misy vehivavy tiako izay, miara-mianatra aminay. Efa notoriako fitiavana izy dia niteny tamiko hoe aleo rehefa afaka bac vao miaraka izahay, fa bedy izy. Izahay amin’izao « classe de première ». Tena bedy marina ve izy sa tsy te hiaraka amiko ? Dia hiandry azy ve aho nefa mbola ho ela izany ho afaka bac izany ?
Maro ny ray aman-dreny no mametraka io fepetra io amin’ny zanany, hoe : aleo rehefa mba manana bac vao miditra amin’izany fiainam-pitiavana izany. Araka izany, azo inoana fa marina ny teniny, raha tsy hoe : misy anton-javatra hafa mahatonga anao tsy hino izay valin-teny nomeny anao izay angamba. Ny anton’ilay fiandrasana ny bac ho afaka mantsy, dia mba hahafahana mifantoka kokoa amin’ny fianarana. Amin’izay koa, efa mba lehibe sy tomponandraikitra kokoa amin’ny fanapahan-kevitra raisina. Ny hiandry azy na tsia indray, dia fanapahan-kevitrao madiodio. Tsy azo terena mantsy ianao hiandry azy, nefa tadidio fa misy fitenenana ihany koa manao hoe : izay tia mahandry.
Tena porofom-pitiavana marina ve ny firaisana ara-nofo ? Mangataka ny hiray amiko foana mantsy ny olon-tiako, nefa izaho mbola tsy te hiditra amin’izany. 17 taona aho ary 19 taona ny lehilahy miaraka amiko.
Porofom-pitiavana ny firaisana ara-nofo, saingy tsy izany ihany no atao hoe : porofom-pitiavana, fa misy zavatra hafa be dia be. Porofom-pitiavana ihany koa ny fiandrasana ny fahavononan’ny olona miaraka amin’ny tena. Raha mangataka anao hiray ara-nofo aminy ary ilay olon-tianao, ho porofom-pitiavana dia izao avaly azy : porofoy amiko ihany koa ary fa tia ahy ianao, satria izay tia mahandry. Raha tsy mahandry ny fahavononanao izy fa misaraka aminao, dia tsy tena tia akory izany, fa ny fahadiovanao fotsiny no tiany alaina. Tokony ho fantatrareo koa anefa fa mbola tsy ampy taona ianao. Ny lalàna eto amintsika dia manasazy ny olona miray ara-nofo amin’ny zaza tsy ampy taona, eny na dia nanaiky aza ilay tsy ampy taona. Heverina ho toy ny fanararaotana ara-nofo foana izany.